Kutheni amaQela okuThengisa nokuThengisa efuna i-ERP yamafu | Martech Zone
Iinkokeli zentengiso kunye nezentengiso zizinto eziyimfuneko ekuqhubeni ingeniso yenkampani. Isebe lezentengiso lidlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni ishishini, ekuchazeni okunikezelwayo, nasekumiseni umahluko. Ukuthengisa kukwavelisa umdla kwimveliso kwaye kudala izikhokelo okanye amathemba. Kwikonsathi, amaqela okuthengisa ajolise ekuguqulweni kwethemba kubathengi abahlawula. Imisebenzi inxibelelene ngokusondeleyo kwaye ibalulekile kwimpumelelo yeshishini.
Ngenxa yokuthengisa kunye nefuthe kwintengiso, kubalulekile ukuba abenzi bezigqibo bandise ixesha kunye neetalente abanazo, kwaye ukuze benze njalo kufuneka babenolwazi lokuba amaqela enza njani kuwo wonke umgca wemveliso. Inkqubela phambili kwitekhnoloji yenze kwalula ukufumana ukufikelela kwelona xesha kulwazi malunga nabasebenzi beshishini kunye nabathengi. Ngokukodwa, itekhnoloji ye-ERP esekwe kwilifu ibonelela ngezi zibonelelo.
Yintoni i-Cloud ERP?
I-Cloud ERP yiSoftware njengeNkonzo (i-SaaS) evumela abasebenzisi ukuba bafikelele kwisoftware yokuCwangciswa kwezixhobo zoShishino (i-ERP) kwi-intanethi. I-Cloud ERP ngokubanzi ineendleko eziphantsi kakhulu ezisezantsi kuba izixhobo zekhompyuter ziyaqeshiswa ngenyanga kunokuba zithengwe ngokuthe ngqo kwaye zigcinwe kwindawo. I-Cloud ERP ikwanika iinkampani ukufikelela kwizicelo zazo ezibalulekileyo zeshishini nangaliphi na ixesha kuyo nayiphi na indawo nakwesiphi na isixhobo.
Liguqukela njani ilifu ERP?
Umdla kunye nokwamkelwa kwelifu kunye nezisombululo zolawulo lweshishini sele kunjalo likhula kule minyaka yangoku. Ukonyusa inkqubela phambili kwitekhnoloji inyuse imfuno yezixhobo ezixhumeneyo kunye nedatha yexesha lokwenyani ukunceda ukwazisa izigqibo ezibalulekileyo zeshishini. Ukusetyenziswa kwezixhobo ezifanelekileyo ezinje ngeefowuni, iitafile, kunye nezinye iiasethi zedijithali kutshintshe indawo yokusebenza.
Ukusukela ubhubhane we-COVID-19, ibango lesisombululo sefu kunye neselfowuni yaqhuma. Isidingo sokuqhuba ishishini naphina kwaye nangaliphi na ixesha sikonyuse ibango lonxibelelwano lwelifu. Eli bango likhokelele ekwenziweni okukhawulezileyo kweenkqubo zolawulo lweshishini elihambayo elixhobisa abasebenzi ngesakhono sokusebenza ngaphandle kweofisi kwaye bahlale behlaziywa kwidatha yequmrhu ngexesha langempela. Uqikelelo lukaGartner olo loluntu kwihlabathi liphela Ingeniso yelifu iya kukhula ngeepesenti ezi-6.3 ngo-2020. Ngaphaya koko, isoftware njengenkonzo (i-SaaS) ihlala iyeyona ndawo inkulu yentengiso kwaye kulindeleke ukuba ikhule iye kwi-104.7 yezigidigidi kwi-2020.
Acumatica iqaphele imfuno yesisombululo sefu kunye nesisombululo ukusukela ekusekweni kwayo ngo-2008, kwaye ihlala iphucula izisombululo zayo ukulungiselela ngcono iimfuno eziguqukayo zamashishini okukhula okuphakathi. Kule Septemba nje idlulileyo, umzekelo, iAcumatica ibhengeze ukukhutshwa kwe I-Acumatica 2020 R2, okwesibini kohlaziyo lwemveliso ephuma kabini ngonyaka.
Ukukhutshwa kwemveliso entsha kubandakanya inani elibalulekileyo lohlaziyo, kubandakanya:
Umdibaniso kunye nesicelo esiphambili seCommerce Shopify
Ukudalwa kwe-Akhawunti / i-ML enikwe iiAkhawunti ezenziwayo yokuDala amaxwebhu, eyenza lula indlela abasebenzisi abayilungiselela ngayo idatha enokubonwa kwideshibhodi, ihlalutyiwe kwiitafile zepivot, kwaye isetyenziselwa izaziso zexesha lokwenyani.
Inzalelwane ngokupheleleyo Isisombululo sesoftware sePOS ebonelela abathengisi ngokufumaneka kwempahla yexesha lokwenyani, iindawo ezininzi, kunye nolawulo lokugcina isiphelo ngasemva ngeskena sebhakhowudi. Ngoku, abasebenzisi banakho ukulawula amava e-omni-epheleleyo ngaphandle kokuba nabasebenzi be-onsite.
I-AI / ML yenziwe ukuba isebenze Ulawulo lweendleko eziphambili, ebandakanya ukondla ngeebhanki ngombane kumakhadi eenkampani kwaye kuzenzele ukwenziwa kweerisithi ukuze kulungelelaniswe iinkqubo zabasebenzisi abaqhelekileyo abahambahambayo kunye nabasebenzi abasebenza ezi-ofisini.
Ulawulo lweendleko lubaluleke ngokukodwa ngoku kumasebe ezemali. Ubhubhane we-COVID-19 ukhokele iinkampani ukuba zibeke ugxininiso olutsha kulawulo lweendleko, kugxilwe ekufumaneni iindawo zokonga iindleko. Iziganeko ezingazange zibonwe kulo nyaka ziye zaqinisa isidingo samashishini sokutyala imali ekubonakaleni okungcono, kulawulo lweendleko olungcono, nakwimishini ezisebenzelayo. Iinkokheli zeshishini zifuna izibonelelo, ngoku ngakumbi kunangaphambili, ukuze zenze izigqibo ezongezelelekileyo zeshishini. Amandla amatsha e-Acumatica okufunda ngomatshini aya kulumka ekuhambeni kwexesha, afunde kwizilungiso ezenziwa ngesandla zedatha engenisiweyo ukuze ekugqibeleni kulungelelaniswe iinkqubo eziqhelekileyo zemali kunye nokugcina imali yamashishini.
Ngaba i-Cloud ERP ixhasa njani ukuThengisa kunye nokuThengisa?
I-Cloud ERP inokubonelela ngamaqela okuthengisa ngombono opheleleyo wamathuba, abafowunelwa, nayo yonke imisebenzi enefuthe kwisigqibo sentengiso. Ukongeza, ukunikezelwa kwesikhokelo kunye nokuhamba komsebenzi kunokunceda ukulawula iinkqubo zokuthengisa ukuphucula ukusebenza kakuhle. Izixhobo ze-ERP zonyusa ukuhamba kolwazi, ukunciphisa ukujikeleza, kunye nokunyusa amaxabiso asondeleyo.
Kumaqela entengiso, i-ERP yelifu inokuxhasa isisombululo esidityanisiweyo sentengiso, esiqhagamshelene ngokuqinileyo nezemali kunye nolawulo lomxholo. Ukuba nesisombululo esidityanisiweyo sentengiso kunokuphucula ukusebenzisana phakathi kwentengiso, ukuthengisa kunye nenkxaso ngelixa uqinisekisa ubuninzi be-ROI kwidola nganye yentengiso echithwe. Idityaniswe nenkqubo ye-ERP, amaqela okuthengisa nawo anokuphakamisa iinkqubo zoLawulo lwaBathengi baMakhasimende (CRM) ukulawula izikhokelo, ukuphucula ukuguqulwa, ukulinganisa ukusebenza kwephulo, ukunxibelelana nabafowunelwa, kunye nokuphucula imveliso. Banokubamba izikhokelo ezivela kwiifom zewebhu, izintlu ezithengiweyo, iintengiso, i-imeyile ngqo, iminyhadala kunye neminye imithombo.
Ngenxa yoyilo olusekwe kwiwebhu, uninzi lwamafu e-ERP anikezela ngee-API zokudityaniswa okukhawulezileyo kwezinye izixhobo zesoftware kunye neenkqubo. Izibonelelo zokuthengisa kunye namaqela entengiso zininzi, kubandakanya ukumiliselwa okukhawulezayo kunye nexabiso eliphantsi kunye nexesha elikhawulezayo lokuthengisa kwintengiso yezicwangciso-buchule ezihamba-hambayo. Ngokufezekisa isisombululo se-ERP yelifu, ukuthengisa kunye namaqela entengiso anokufumana ulawulo olukhulu ngakumbi kwiinkqubo zawo kunye nokuqonda okungcono ekusebenzeni kwabo ngexesha lokwenyani. Banokugcina imveliso iphezulu ngokunika ukufikelela kwi-intanethi kulwazi oluhlaziyiweyo naphi na apho basebenzisa nasiphi na isixhobo nangaliphi na ixesha.
tags: acumaticaApiukonga iindlekoERPUlawulo lweendlekourhwebointengiso ye-erpisoftware poskwiintengisothenga
Imiceli mngeni kwishishini kunye namathuba nge-COVID-19 Ubhubhane